Mgbe oge ruru iji chepụta CircuPress anyị na-achọ, kwa ụbọchị na kwa izu, anyị hapụrụ ma goro ndị ọkachamara ọrụ Ndị mọnk Email ime ya. Ndị mọnk Email nwere ihe karịrị 100 mara mma, kachasị mma ndebiri email nke ị nwere ike ịzụta ozugbo na saịtị ha ma ọ bụrụ na ịnweghị nhazi emegoro.
Ohere bụ na ị na-etinye ọtụtụ ego na-agbapụ email nke nwere ike ịgụta na ọtụtụ ngwaọrụ. Ihe kariri ọkara nke mmadụ niile na-enyocha email na ngwaọrụ mkpanaka ha - okpokoro okpokoro ochie gị na enweghị nzaghachi nwere ike ịdaba na ahịhịa. Jiri ụfọdụ nwalee Litmus iji hụ!
Tags: Email (gam akporo)email imeweemail Marketingndị mọnk emailNtinye 2004Ntinye 2008Gmail (gam akporo)Gmail (Desktọpụ)Gmail (iOS)Gmail (Ekwentị)Hotmail (Desktọpụ) Hotmail (Mobile) ThunderbirdlitmusLive LiveOzi (iOS)Ozi (OSX)Outlook 2003Outlook 2007Outlook 2010Outlook 2011 maka MacOutlook 2013Outlook Expressemail na-anabataNWA (Desktọpụ)Nza (iOS)Ozi WindowsYahoo Mail (Desktọpụ)Yahoo Mail (Ekwentị)